Saddex Nafood....!!! (Qiso Jaceyl oo xanuun badan, Qeybti 7-aad) - Caasimada Online
Home Warar Saddex Nafood….!!! (Qiso Jaceyl oo xanuun badan, Qeybti 7-aad)
Saddex Nafood….!!! (Qiso Jaceyl oo xanuun badan, Qeybti 7-aad)
Qeybti 7-aad Qeybihi hore halkan ka arag 1-aad 2-aad 3-aad 4-aad 5-aad 6-aad
Intii hore waad waallaydeen, markiise aad miyirsateen ayaad fekerteen. Iyada ayaa dhiirran oo isxilqaantay, oo inta ay salligii la kacday kugu tidhi: “Aynu meel asturan tagnee ina keen.” Adiguna kitaabbadii iyo tusbixii oo halkii daadsan inta aad ka tallaabsatay ayaad sidii sange taxaaban naagtii ku hor socotay dabo saqlaysay. Qaybta dambe ee beerta oo caws doog ah leh ayey ku geysay. Guriga waxaad u geli weydeen haddii uu odaygeedu soo galo jeer uu iskiin soo dul taago ma ogaan kartaan. Halkii ayaad muddo kale sii laba legdoonayseen. Markii dambe waad laylyantay oo toobaddii iyo istaaqfurullihii badnaa waad joojisay. Sida iyadaba miyirku ugu soo noqday adigana in uu kuugu soo noqday waa ay hubtaa, malahase in aad sideeda raalli u tahay ma hubto. Malaha si ay taa u ogaato ayey tidhi: .
“Alla maxaynu nefisnay!”
“Cadaabina waa ay dambaysaa”, ayaad ku cabatay.
“Imikaba cadaab ayeynu ka soo baxnay.”
“Haa, mid shaddiid ah”, ayaad qirtay.
Markii ay salaaddii arooryo soo dhowayd waxaad ku qubaysatay musqul yar oo beerta ku taal. Salligii aad ku tukan jirtay waa adigii xalay ku qooqay, sidaa darteed subaxdaa go’aaga ayaad dhigatay. Adiga oo sujuud dheer u foorora ayuu ninkii guriga lahaa soo galay. Inta uu iskaa yar dul taagay ayuu ku dhaafay. In yar ka dib adiga oo weli sujuudsan ayaad daaqadda furan ka maqashay ninkii oo Siraad weydiinaya.
“Goortan maxaad ka qubaysatay?”
“Kulayl bay ahayd oo waan gubtay.”
“Ma rumaysanaysaa xerowgii in uu goortaa sujuud ku ooyayo?”
”Waa wali barakaysan”, ayey ugu jawaabtay.
”Wallaahi kaasi waa wali barakaysan! Waa in aynu ka ducaysannaa.”
”Mushaharkana aynu u kordhinno mar haddii uu shaqadiisa ka adkaaday”, ayey ku taageertay.
”Haa, aynu u kordhinno.”
”Eebbow, sow adigu wax walba ma aad qaddarin? Sow adigu aniga iyo Siraad baahida naguma aad wada abuurin? Eebbow, waxaa ila tagtay quwad iga xoog badan ee quwaddaada aan mid ka sarraysaa jirin iigu denbi dhaaf! Ilaahow, waad ogayd aniga oo Qur’aan iska akhrisanaya in ay Siraad daaqad furan oo nal ka baxayo isku qaawisay. Ilaahow, waad ogayd in aan ka cararay oo haddana sheydaan igu celiyey. Ilaahow, waad ogayd aniga oo halkaa iska fadhiya in ay i soo doonatay. Ilaahow, waad ogayd in aan kaa baqayey laakiin aan qofkii qaawanayd ee i hor jiiftay iska soo qaban kari waayey. Ilaahow, ii denbi dhaaf! Ilaahow, adeegtada ayaan guursanayaa ee ii sakhir oo berri afkeeda “haa” ka yeedhsii!
Runtii ducada af soomaaliga ah markii aad dib u dhadhansatay waxay kula noqotay muran, dood iyo garnaqsi tii carabida aad uga duwan. Waxaad malaysay af soomaaliga sidiisaba in aan baryo loo abuurin.
Adiga iyo Siraad habeenkaasi wuu isugu kiin horreeyey ee isuguma kiin dambayn. Ninka guriga leh awel maqnaanshihiisa ayaa la dhibsan jiray, imikase joogistiisa ayaa la neceb yahay. Habeenka dheer ee aamusan lama jeclayn oo waaga ayaa loo hiloobi jiray, imikase qorraxda ayaa la neceb yahay oo habeenka ayaa loo hiloobaa. Shaqada caajis iyo cagojiid ayaad ku iman jirtay, imikase sidii neef karreeb ah ayaad casarka soo horrataa. Hambo iyo hunuunuf ayaa awel marka aad timaaddid laguu daydayi jiray, imikase cunto gaar ah oo diirran ayaa weel nadiif ah laguugu keenaa. Awel balax qaboobay oo koob ku jira ayaa shaah lagaaga dhigi jiray, imikase falaas hayl leh ayaa lagu ag dhigaa. Shilimada mushaharka ah ayaad bisha soddonkeeda sugi jirtay, laakiin imika xoolaha qoyska qayb dhan baad ku leh dahay. Macawis, shaadh iyo dacas wada duug ah ka ilbaxday oo surwaal iyo dhar magaalo ayaad baratay… …………LA SOCO QEYBTA XIGTA JIMCAHA XIGA INSHA ALLAH